Ukuqaliswa ngokusemthethweni kweGeomate! - Geofumadas
eGeomate ukukhululwa esemthethweni!
Meyi, 2011 Phuma kakuhle, ezintsha, egeomates My
Ngeneliseko enkulu I-Geofumadas iqala ngokusemthethweni i-Beta version yeGeomate kuluntu oluthethayo AKUNYE ISIHLOKO.
Ngokwenene, yinguqulelo eguqulelwe kwisiNgesi ngeGeifumadas, kunye nomxholo wayo oya kudibaniswa kwangokunjalo. I template ye-CMS ifana, tshintsha igama elisekelwe kwiimigaqo oye waziwa ngexesha:
I-pseudonym g! ozalelwe ngamaGeofumadas, shwa nkathela izinto ezininzi kunye nobunzima bokungaziwa.
Emva koko intsebenziswano phakathi kwezinto ezibonisa ukuba iziqulatho zigxininisekile kunye negama elibonisa isisombululo kumdlalo oqilileyo.
Ngenxa yoko, iindito zamatama epeyinti yeGeofumadas ngelifu emqolo liba yinqanaba le-chess.
Siza kubona ukuba ixesha litshintshile olu qulunqo lokuqala, njengoko kwenzeka ngeGeofumadas, kodwa ngoku yinto esinayo kwaye njengoko i-Google ithi: kuba yiyo nguBeta.
Iminyaka ecaleni ye-4 iminyaka i-Geofumadas yenze indawo yokufunda yomsebenzisi echaphazelekayo phakathi kwamathandabuzo kunye nezimpendulo ezinamanqanaba kwinqanaba le-20 ngenyanga. Siphumeze indawo ebalulekileyo abaphulaphuli iSpanish abathetha, ukuncedisana ezinye izithuba ekuhlaleni phakathi apho ziyahlonelwa ukuba aluze lutshitshe ukuthatha indawo nabo ezithile ezintsha kusimangalise kunye nentsusa umxholo kunye nengqeqesho yesifundo.
Phantse iinyanga ezintandathu ezedlulileyo sashiya isiqendu sasekuqaleni kwaye saqala ukufikelela kwiintanethi zentlalo kancane kancane. Kungoku ngoku I-Twitter sele idlula abalandeli be-500, ngelixa i-Facebook ifika kwi-100 abalandeli. Ngokuqinisekileyo kwiminyaka emine izinto ezininzi zifundwa kwaye kwithuba elithile ndivakalise injongo yokuqalisa iiGeofumadas kubasebenzisi kwiinguqulelo eziguqulelwe kwisiNgesi.
Amava okuzama ukuguqulela ngokusekelwe kwiinkonzo ze-inthanethi ezifana Translator GoogleNgokwenza oko, nangona kunjalo, iziphumo ezigqwesileyo zifumaneka xa uguqulela ukusuka kwisiNgesi ukuya kwezinye iilwimi; Ukongeza kule Geofumadas iqulethe ulwimi oluthile, olupheleleyo lamagama asemgangathweni adidekile kuluntu oluthetha isiSpanish.
Ngoko indlela eyona nto esiyifumene ngayo kukuba kwenziwe inguqulelo ekhethekileyo, ekulindeleke ukuba iiNglo-Saxon zikwazi ukuqonda umyalezo wasemva weposi. Ngenxa yoko, u-Nancy Godoy Cordero, wasePeru uye wenza umsebenzi omkhulu, ezama ukuqonda umxube phakathi kokutshaya kwezobuchwepheshe, isimo sengqondo somlobi kunye noko umfundi wokugqibela angalindela.
Thina ayavuma, ayibanga simple, emails abaninzi qinisekisa ukuba nangona sonke siyayiqonda ngeSpanish, kwiintetho ekusetyenzwa phantsi egqwethekileyo kancinane ngaphakathi kummandla UTM, kodwa lempabuko ngaphaya 6 degrees wobude kunye 4 inkululeko. Ngoko ke, ukuze uphephe ukuntsokotha, siye saphetha echaza amanye amagama emazantsi isithuba kwaye kwiimeko ezininzi ngasekhohlo "njengoko kunjalo", kunye nangcaciso ukuba CC ukwahluka kancinane ukuqonda abasebenzisi lesiphelo "uthethe kakuhle kwiiofofasadas, ukutolika oko kuthetha".
Ziziphi iindawo ezihamba zikarhulumente Phuma kakuhle
Lo mxholo ujoliswe kubasebenzisi ngaphaya komxholo wesiLatini, apho imeko yamaGeofumadas imele ifane ne-4%. Kuyaqondakala ukuba le themes isisiseko kubasebenzisi be-CAD / GIS ubuchwephesha, kunye nama-aggregates yomjikelezo wezityalo kunye nezinye iifashi zewebhu. Ekugqibeleni, asenzi lutho ngaphandle kweemvelaphi ezithunyelwa ngaphandle kwiimeko zethu zaseSpeyin, kwimeko engaphezulu kwehlabathi kodwa enemibuzo efanayo:
Ndingayifaka njani iifayile kwi-AutoCAD?
Ngaphi phantsi kweemifanekiso zeGoogle Earth?
Ndisebenzisa njani i-software ye-CAD / GIS endibiza imali encinci?
Iipaliti zamanqanaba zenziwe njani kwi-Civil 3D?
Yintoni iza ku-AutoCAD 2013 ibuyise?
Siyazi ukuba ngaphandle kweminye imithombo yezobuchwepheshe kunye nakwezinye iingcamango ezigqithiseleyo kulabo abecala ukuba iphepha alikwazi ukwenza ngaphandle kwileta ñ. Kodwa sinethemba lokuba umphumo wezinto esizifunde ngaphezu kwe-1,000 post kwiminyaka emine inokuba luncedo kwiimarike zehlabathi jikelele.
Igrafu ibonisa ukufaniswa phakathi kwabasebenzisi baseGeomate (phezulu) kunye neeGofumadas (ezantsi) ngenyanga yokugqibela. Mhlawumbi ukutshintsha kwimiba, kodwa ngoku ungabona ukuba amazwe apho ukuvakatyelelwa okuninzi kufinyelela khona Phuma kakuhle Zizo:
Ayeki ukubiza ingqalelo kwiSpeyin njengemarike enkulu yemveli, nangona oku kuphela kubonisa i-59% yokutyelela, ngelixa i-Geofumadas i-87% ivela kulabo Amazwe e-10 endithe ndathetha kuyo ukungeniswa kwangoku. Ukulindela okungaphezulu kunomdla, ndandimangaliswa ekuqaleni kokutshatyalaliswa kwimiba ye-Manifold ye-GIS, ebonakala ngathi iindawo ezikumantla eMerika naseCanada; kwezinye iindawo ezigqwesileyo ze-Civil3D, i-GPS kunye neePetroli ezipheleleyo ezibonakala zifundo eziza kuqhuma Phuma kakuhle.
Enyanisweni, qhubeka uguqulelo umxholo, ngoku kukho 45% yenani lilonke selivele lilayishiwe, urhwebo ingxelo Beta kuba amakhonkco ezininzi lwangaphakathi kufuneka ilungelelaniswe kwaye ezinye iinzame ukuguqulela waya kuyo okuhle.
Kodwa ekugqibeleni, siqalise ukuqala umsebenzi Ukubeka iWebhu, kukhupha i-InforSEO ngokupheleleyo. Siza kuthetha ezinye iimveliso zeGeomate njengoko zikhula.
Siphinde siqalise i-Geomate Beta ukusinika ixesha lokucinga ngeendlela zokudala ukugubha umnyaka wesine wamaGeofumadas kunye nabasebenzisi ngeli nyanga ezayo kaJuni.
... Ndineengcamango ... kwaye ndiyamkele amacebiso.
Phuma kakuhle egeomates My
Post edlulileyo«Edlulileyo Izifundo ezintsha ze-e-learning Iqela leDMS
Post Next I-Bentley Imephu ye-PowerView V8i, Ukuprinta kokuqalaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-4 "Ukuqaliswa ngokusemthethweni kweGeomate!"
Natania San Juan uthi:
Ndivuyayo ukubona indlela ukhula ngayo kwaye uvelise umxholo ophezulu kunye nomgangatho wethu kuthi, abasebenzisi bakho. Vuyiswa!
Sawubona uNancy, kukuhle ukukubona apha.
Ndiyabulela amanqaku, sele ndilungisile.
Sawubona Don G!
Okokuqala, abanye bavuyiswa kakhulu ngenxa yokukhululwa ngokusemthethweni kweGmate! Inyaniso kukuba, ngokuthe ngqo, ndandifuna ukuzibuza ngezolo, NJENGOBA ndibona iinguqu eziguqulelwe (umzamo owenziwe) zixhomekeke kuba njengoko uya kuqonda ukuba ndiziva inxalenye yendalo, ... 🙂
Kwaye ndinqwenela kakhulu ukuba le nto yokuqala igcinwe kwaye ivelise ngexesha. Ukubetha kakuhle, mhlobo!
Ekugqibeleni izichazi ze-2:
1) Igama lam elisemthethweni ndinguNANCY GODOY CORDERO nceda ulungise le 🙁
I-2) Umgca wokugqibela 'Yiya eGeomate!' Ngaba ikhonkco? kuba ayihlangananga ...